Ithegi: umxholo obonakalayo | Martech Zone
Maka: umxholo obonakalayo
Ukutyelela: Isixhobo saMandla sokwenza uMxholo oBonakalayo oBonakalayo
NgoLwesithathu, Meyi 5, 2021 NgoLwesithathu, Meyi 5, 2021 UNayomi Chibana
Sonke sivile ukuba umfanekiso ufanele iwaka lamagama. Oku akunakuba yinyani nanamhlanje njengoko sibona olona lonxibelelwano luhle ngalo lonke ixesha- enye apho imifanekiso iqhubeka nokutshintsha amagama. Umntu ophakathi ukhumbula iipesenti ezingama-20 kuphela zezinto azifundileyo kodwa iipesenti ezingama-80 zezinto azibonayo. I-90% yolwazi olugqithiselwe kwingqondo yethu luyabonakala. Yiyo loo nto umxholo obonakalayo uyeyona ndlela ibaluleke kakhulu yokwenza
Olu papasho kunye nomsebenzi omninzi esenzela abathengi kubandakanya umxholo obonakalayo. Iyasebenza ... abaphulaphuli bethu bakhule kakhulu ngokujolisa kumxholo obonwayo kwaye sikwabancedile abathengi bethu ukuba bakhule ukufikelela kwabo ngomxholo obonakalayo njengenxalenye yomxube. Oku kwi-infographic eyenziwe yiMedia Domination Media ukubonisa amandla omxholo obonakalayo. Akukho mfihlo yokuba abathengi baphendula ngcono kwintengiso ebonakalayo, kwaye yile
Indlela ukuThengisa kwezeNtlalo kuXakeke ngayo ngeNtengiso yezeMveli
NgeCawa, uJuni 22, 2014 NgoMvulo, Oktobha 12, 2015 Douglas Karr
Andiphikisani kwaphela nentengiso kunye nokuhlawulela ukunyuswa, kodwa uninzi lwabanini bamashishini kunye nabanye abathengisi abawucacisi umahluko. Rhoqo, ukuthengiswa kwentlalo kubonwa njengenye nje indlela. Ngelixa sisicwangciso esongezelelweyo ukongeza kwintengiso yakho, intlalontle inikezela ngamathuba ahluke kakhulu. Imithombo yeendaba kwezentlalo ibiphazamisa ubume bezentengiso okoko yaqhambuka kwindawo kwaye yanikezela ngeemetriki ezilandelelanayo abathengisi abaphupha ngazo. Ne